Isitudiyo saseTanhouse, uCulross - I-Airbnb
Isitudiyo saseTanhouse, uCulross
Isitudiyo seflethi yanamhlanje, ebonelelwe kakuhle kwaye ekhululekile kwilali entle yembali yaseCulross. Isitudiyo sinoyilo oluvulekileyo lwesicwangciso esithetha ukuba sikhaphukhaphu kakuhle kwaye sinomoya kwaye sineembono ezingoyiswayo kwilali yonke kunye noFirth of Forth. Ipropathi ixhamla kwindawo yokuzivocavoca yasekhaya, indawo yokupaka ekhuselekileyo kunye neebhayisekile zasentabeni ziyarenta. Indawo efanelekileyo yokwenene kwenye yezona ndawo zintle zaseSkotlani, iilali zenkulungwane ye-17.
Sukuthatha igama lethu ngayo nangona-jonga uphononongo lwethu lokuhlala mva nje!
Indlu enkulu, i-Tanhouse (emalunga no-1750), ihlala ngaphakathi kwekona enkulu kwaye iflethi yeStudio ibekwe kumgama othe qelele nendlu ukuze iindwendwe zibe nendawo yokuhlala ngokupheleleyo ngexesha lokuhlala kwazo. Ipropathi ixhamla kwindawo yokupaka ekhuselekileyo kwi-studio flat.
Isitudiyo ngokwaso sinoyilo oluvulekileyo lwesicwangciso esithetha ukuba sikhaphukhaphu kakuhle kwaye sinomoya oneembono ezingoyiswayo kwilali yonke kunye noFirth of Forth. Isitudiyo sinebhedi yobukhulu bokumkani kunye nesofa yezihlalo ezi-2 kunye nesitulo esilungele ukubukela i-32' TV + DVD/CD player. Kukwakho nokhetho oluncinci lweefilimu, kunye nemidlalo kumzamo wokugubungela zonke iimfuno zokuzonwabisa.
Indawo yasekhitshini inefriji, umatshini wokuhlamba izitya, i-microwave, i-oveni encinci / igrill / ifryer yomoya kunye ne-2 hob yokutshisa. Itafile kunye nezitulo zimi ekupheleni kwekhitshi kunye negumbi elaneleyo lokutya iindwendwe ezi-2 (zonke izitya kunye nezixhobo zokupheka ziyafumaneka). Ukuba imozulu intle (iSkotlani ixhomekeke...) kukho indawo yokuhlala yabucala engaphandle yeendwendwe ethatha umbono omangalisayo ukuphumela phambili. Ukhetho oluqhelekileyo lwezitya, iimbiza njl njl.
Ukuba uceba ukutya ngaphandle ngokuhlwa singacebisa kakhulu ukuba ubhukishe kwindawo yentengiso yendawo (i-Red Lion.) Ngexesha leenyanga zasehlotyeni kukho iicafe ezi-4 ezithandekayo elalini kwaye (ngokuqhelekileyo) imarike encinci kwindawo eluhlaza kwilali ngeeCawe.
Igumbi lokuhlambela lineshawari yekona yombane, ifestile yevelux, indlu yangasese kunye nesitya sezandla. Zonke ilinen, iisepha, iitawuli njl.njl. ziya kubonelelwa ngababuki zindwendwe bakho ukongeza kwisepha njalo njalo. Sinomatshini wokuhlamba iimpahla apho iindwendwe zexesha elide zikhululekile ukuwusebenzisa.
Sineebhayisikili ezi-2 zeentaba (kunye nezigcina-ntloko ezimbini) ezinokuqeshwa ngentlawulo encinci yemihla ngemihla ukuze iindwendwe zihlolisise indawo ngebhayisikili! Sikwanayo nendawo yokuzivocavoca yasekhaya epheleleyo apho iindwendwe zinokufikelela khona. Indawo yokuzivocavoca inomatshini obalekayo, umatshini wokukrola, iintsimbi zeketile kunye nebhegi yepunch ekhululekile ukuba isetyenziswe kwiindwendwe (iindwendwe ziyacelwa UNGASEBENZISI i-turbo bike set up).
Sinikezela ngeendwendwe zethu amaqanda asimahla kwiinkukhu zethu kwaye (ngethemba) ukhetho lweejam ezenziwe ekhaya kwimifuno yethu / isitiya seziqhamo (nceda uqaphele ukuba oku kuxhomekeke kubukho!).
Ipakethe eyamkelekileyo ibonelelwe ngolwazi lwendawo, isicwangciso esicacileyo sohambo lwendawo kunye nencwadi yesikhokelo.
4.92 · Izimvo eziyi-109
I-Culross yindawo ekhethekileyo yokuhlala. Umzana ngexesha elidluleyo; owona mzekelo upheleleyo eSkotlani namhlanje weBurgh yenkulungwane yeshumi elinesixhenxe neyeshumi elinesibhozo.
Okona kudumileyo, kwiminyaka yakutshanje ubuncinci, idolophu ibisetyenziswa njengendawo ephambili yokufota kuthotho oludumileyo lukamabonakude i-Outlander. Ukuhlala edolophini kunyanzelekile kubalandeli bomdlalo kamabonwakude osebenza njengelali yaseCranesmuir.
Kukho izinto ezininzi zokwenza eFife nakwiindawo ezingqongileyo. Kubadlali begalufa singaphakathi kuhambo olulula lwezifundo ezininzi - iGlen Eagles kunye neSt Andrews zombini ngaphakathi kweyure yokuqhuba. Kubathandi bemidlalo yeemoto iKnockhill Race Circuit kukumgama omfutshane kuphela. Ivili leFalkirk kunye neKelpies enkulu nazo zisondele kwaye ziqinisekisa amava akhethekileyo. njenge-whicky distillery e-Deanston.
Siyindawo entle yokuhlala kubakhenkethi- ezi ngamahlathi angenakubalwa kunye neehambo ezisecaleni komlambo ukusuka kwiminyango yethu (sibonelela ngemephu yendawo yendawo/ukunyuka).
Umgama othe qelele kancinci (i-25 mins drive) zii-Ochil Hills kunye neLomond Hills (imizuzu engama-30 yokuqhuba) ezibonelela ngamava amnandi okunyuka intaba. Kwabo banomdla wokufaka i-Munro (okanye ezimbini!) Iinduli ze-Crainlarich zijikeleze i-60-75 imizuzu yokuhamba, okanye i-Arrochar Alps (i-Loch Lomond), inokufikelelwa kwimizuzu engama-60-90.
Siyazama ukubakho ukuze samkele iindwendwe kodwa ngenxa yezibophelelo zomsebenzi oku akunakusoloko kusenzeka. Sisoloko siqhagamsheleka kwifowuni ukuba kuyimfuneko (iifowuni, i-sms, i-whats-app njl.). Sifuna ukuba zonke iindwendwe zethu ziphumle kwaye zizive zisekhaya ngexesha lokuhlala kwazo.
Siyazama ukubakho ukuze samkele iindwendwe kodwa ngenxa yezibophelelo zomsebenzi oku akunakusoloko kusenzeka. Sisoloko siqhagamsheleka kwifowuni ukuba kuyimfuneko (iifowuni, i-sms,…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Culross